SUPER PADS - your beat maker DJ app! 3.8.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.8.2 လြန္ခဲ့ေသာ2ရက္က
Application မ်ား ဂီတ & အသံ SUPER PADS - your beat maker DJ app!
SUPER PADS - your beat maker DJ app! ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဒါကကျနော်တို့သုံးစွဲဖို့ get ဘယ်တော့မှသမျှသောသူတို့အားအပိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုခြင်းမရှိဘဲ, အခမဲ့ဂီတ app ကိုသုံး, သာ app ကိုပိုရှုပ်ထွေးအောင်စူပါလွယ်ကူပါတယ် SUPERPADS တစ်ပျော်စရာဖြစ်ပါသည်။
SUPER pads နှင့်အတူ, သငျသညျယခုထွက်ဖြစ်ကြသည်သမျှသော hits play နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဒါဟာစူပါရိုးရှင်းပြီး FUN င်
သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအထင်ကြီးနှင့်သင့်ပါတီများမှာ DJ သမားဖြစ်လာသည်။
အခုအချိန်မှာ SUPER pads ကြိုးစားပါ !!
ပင်မ features တွေ
• youtube ကအပေါ်သင်ခန်းစာဗီဒီယိုများ, ဘယ်လိုအသီးအသီးကိရိယာအစုံအဘို့အ SUPER pads ကိုသုံးပါရန်သင့်အားဆုံးမဩဝါဒပေး;
•သစ်ကိုပစ္စည်းများရဖို့ update လုပ်ဖို့အဘယ်သူမျှမလိုအပ်
•ဒါဟာအားလုံးမျက်နှာပြင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲမှာအလုပ်လုပ်တယ် - ဆဲလ်ဖုန်းနှင့် tablet (HD resolution)
သင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများကိုမရောက်မီ SUPER pads အပေါ်ဖြန့်ချိသစ်ကိုသီခငျြးမြားအကြောင်းကိုသိရန်လိုပါသလော
youtube ကပေါ်တို့၏ channel မှ Subscribe နှင့်, SUPER pads မိသားစုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာ !! :)
သငျသညျ SUPER pads များအတွက်သီချင်းများအပေါ်မည်သည့်အကြံပြုချက်များရှိပါသလား?
hello@opalastudios.com မှ e-mail ကိုပို့ပါ
ရိုးရှင်းပြီးပျော်စရာ SUPER pads,! 😜
SUPER PADS - your beat maker DJ app! အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
SUPER PADS - your beat maker DJ app! အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
SUPER PADS - your beat maker DJ app! အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
SUPER PADS - your beat maker DJ app! အား အခ်က္ျပပါ
vivo-api စတိုး 8.2k 7.9M
SUPER PADS - your beat maker DJ app! ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း SUPER PADS - your beat maker DJ app! အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.8.2
ထုတ်လုပ်သူ Opala Studios
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://site.superpadsapp.com/privacypolicy.htm
Release date: 2019-09-20 18:14:51
လက်မှတ် SHA1: ED:36:59:0E:83:3C:CA:39:B8:47:3D:A0:CA:C2:C8:54:67:F5:A9:A3
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Arthur Motelevicz
အဖွဲ့အစည်း (O): Opala Studios
နယ်မြေ (L): Curitiba
နိုင်ငံ (C): 55
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Paran?
SUPER PADS - your beat maker DJ app! APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ